Luis Suarez oo seegi kara kulanka Manchester United ee Champions League – Gool FM
Luis Suarez oo seegi kara kulanka Manchester United ee Champions League
(Spain) 18 Maarso 2019. Luis Suarez ayaa seegi kara kulanka xiisaha badan ay kooxdiisu ku wajaheyso Manchester United tartanka Champions League kaddib dhibaato ka gaartay Canqowga ciyaartii xalay ay afarta gool uga adkaadeen naadiga Real Betis.
Dhaliyaha reer Uruguay ayaa dhaliyay gool qurux badan iyadoo saddexda gool ee kale uu is raacsaday Lionel Messi.
Suarez ayaa sababo dhaawac canqowga ah garoonka looga saaray dhammaadka dheesha.
Barcelona ayaa Twitter keeda ku xaqiijisay in Suarez uu tijaabooyin mari doono maanta oo isniin ah si loo ogaado inta uu gaarsiisan yahay dhaawaca gaaray.
Man United ayaa Old Trafford ku marti galin doonta Barca lugta hore ee wareega sideed dhammaadka Champions League 10-ka bisha Abriil ka hor inta aysan lugta labaad ku wada ciyaarin Nou Camp lix maalmood kaddib.